निजामतीका उपाध्यक्षले सिंहदरबारभित्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कुटे — Sanchar Kendra
१‘ठुला माछा’ चुडामणि शर्मालाई ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
२भूमि आयोग विघटनको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
३मध्य भोटेकोशीको आइपीओ बाँडफाँट
४थप १२८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ७ को मृत्यु
५दुर्घटनाबाट जोगिएको बुद्ध एयरको विमानबारे सरकारले छानबिन गर्ने
६दक्षिण कोरियामा ह्वात्तै बढ्यो फेरि कोरोना संक्रमण
७७३ अंकले घट्यो नेप्से, सेयर बजारमा पहिरो
८प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज १४ गतेसम्म स्थगित
९झन्डै दुर्घटनाबाट बचेको विमानमा सवार यात्रुको बयान- जहाजभित्रै रुवाबासी चल्यो,आश मारिसकेका थियौँ
१०चितवनका सात स्थानीय तहमा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व
११विराटनगरमा अवतरण गर्न नसकी काठमाडौं फर्किएको जहाजमा के भएको थियो ?
१२माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक सकियो, के भयो निर्णय ?
निजामतीका उपाध्यक्षले सिंहदरबारभित्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कुटे
पछिल्लोसमय सिंहदरबारभित्रै लाजमर्दो तरीकाले अनेकौं घटना घट्न थालेका छन् । यसैबीच आइतबार मात्रै सिंहदरबारभित्रै एक जना उपसचिव कुटिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि आचार्य कुटिएका हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आइतबार दिउँसो निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले उनीमाथि मुक्का प्रहार गरेका थिए ।
भण्डारीले सिफारिस अनुरुप एक कर्मचारीको सरुवा नगरिए पछि उनले कुटपिट गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘उनले कुर्सी उचालेर जाइलाग्नुका साथै गमला समेत फुटाएका छन्’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
२०७५ साउन २८ मा प्रकाशित ।